Madaxweyne Xasan Sheekh oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Dhuusomareeb (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home GALMUDUG Madaxweyne Xasan Sheekh oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Dhuusomareeb...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Dhuusomareeb (Sawirro)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu hoggaaminayo oo ka ambo baxay magaalada Baydhabo ayaa gaaray magaalada Dhuusomareeb ee caasimadda Galmudug.
Garoonka Diyaaradaha Dhuusomareeb waxaa kusoo dhaweeyay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo xubnaha la socday madaxweynaha Galmudug, Xildhibaano katirsan labada aqal , Wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Galmudug.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wefdigiisa ayaa loo galbiyay madaxtooyada Galmudug halkaas oo nasiino kadib la filayo in uu kulamo kula qaato Madaxweynaha Galmudug iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Safarakan uu goordhaw Madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay magaalada Dhuusomareeb ayaa noqonaya safarkii ugu horeeyay uu deegaanada Galmudug ku tago tan iyo markii dib loo doortay, waxa uuna noqonayaa safarkii labaad uu Muqdisho uga baxo.
Previous articleDowladda oo dib u furtay Waddo cusub oo dhagxaan lagu xiray (Daawo Sawirro)
Next articleVilla Soomaaliya oo Shaacisay Qorshaha Madaxweyne Xasan Sheekh u tagay Galmudug